[APK] Download na wụnye Meizu MX6 igwefoto na gam akporo ọ bụla | Gam akporosis
[APK] Download na wụnye igwefoto Meizu MX6 na gam akporo ọ bụla
Na nkuzi ohuru ohuru a bara uru ma oburu na enwere ike ikpo ya nye ya ezigbo udo, aga m akuziri gi otu isi budata na wụnye ngwa igwefoto nke Meizu MX6 ọhụrụ.
Ngwa igwefoto nke anyị ga-enwe ike ịwụnye, n'ụkpụrụ na n'ọtụtụ ọnụ na-enweghị ndị mgbọrọgwụ ọrụ ebe ọ bụ naanị ime ka nhọrọ nwee ike ịwụnye ngwa sitere na isi mmalite ma ọ bụ isi mmalite amaghị ga-ezu. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ngwa a nke igwefoto Meizu MX6 ọhụrụ ma wụnye ya na gam akporo gị, echefula vidiyo ahụ m hapụrụ gị naanị karịa usoro ndị a ebe ọ bụ na ya, Na nkọwa nke vidiyo ị ga-ahụ njikọ njikọ iji budata ngwa ahụ.
Mana gịnị ka igwefoto Meizu MX6 na-enye anyị?
Nke a Meizu MX6 ngwa igwefoto, ọ bụ ezie na o nwere iberibe ahụhụ, kpọmkwem a enweghị itinye ihe nzacha dị iche iche na anyị nwere ya na ngwa ahụ ma enwebeghị m ike ime ka ọ rụọ ọrụ, ma ọ bụghị ya ọ na-aga n'ụzọ zuru oke yana arụmọrụ ya niile enyere.
Yabụ, site na interface dị mfe na kensinammuo nke igwefoto Meizu MX6, naanị site na ịme a mpempe mpempe akwụkwọ site na mmetụ ọkụ na ihuenyo nke gam akporo anyị, anyị ga-enwe ike ịgafe ọnọdụ dị iche iche igwefoto, ụfọdụ ụdịdị m ga-edepụta n'okpuru:
Chọọ iji nyochaa koodu QR
Panoramic iji were foto dị egwu na panoramic mode iji gosipụta dum nke ihu igwe ma ọ bụ foto otu.
Akwụkwọ ntuziaka nke anyị ga-enwe ike iji aka anyị gbanwee ụgwọ nkwụnye ụgwọ nke foto a ga-ewe
Akpaka mode iji were kacha mma foto na ụdị ọ bụla nke ọnọdụ na-enweghị a dijitalụ foto echiche
Denye aka na nri nke igwefoto ịbanye ozugbo na gallery ahụ ma hụ foto ndị ọhụrụ.
Nweta aka ekpe nke bọtịnụ igwefoto ihe caul na-akpọrọ anyị gaa na ọnọdụ vidiyo nke na-emetụ naanị otu aka ndekọ ahụ na-amalite ozugbo.
Na okpuru anyi nwere uzo uzo uzo uzo ato ato, ngbanwu ma obu akpaka.
Igodo nwekwara ike ịgbanwee igwefoto n'ihu na n'azụ igwefoto.
N'okpuru bọtịnụ igwefoto anyị nwere nzacha dị iche iche dị na ngwa ahụ na itinye ndụ, nhọrọ a amaghị ma ọ na-akpata ahụhụ ma ọ bụ na ọ bụ ọrụ anaghị arụ ọrụ na Samsung Galaxy S6 Edge Plus m.
N'ikpeazụ, anyị nwekwara bọtịnụ n'okpuru bọtịnụ igwefoto n'ụdị ntụpọ atọ nke ga-eme ka anyị banye ntọala nke igwefoto ma họrọ ogo foto na vidiyo, rụọ ọrụ ma ọ bụ mebie grid ahụ, mee ka ngụ oge kwụsị, akara ngosi ọkwa ma ọ bụ ọbụna nhọrọ iji chekwaa ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ GPS nke foto ma ọ bụ vidiyo ejiri igwefoto Meizu MX6 a.
Nhọrọ ndị a niile na mkpịsị aka gị na n'ụzọ dị mfe ebe ọ bụ na m na-ekwu interface igwefoto a nke Meizu ọnụ bụ otu n'ime ihe kacha dị ntakịrị nke dị adị na nke kachasị mfe iji.
para budata ngwa igwefoto Meizu MX6 a, ị ga-agabiga na njikọ a ma ziri ezi na nkọwa nke vidiyo ị ga-ahụ njikọ njikọ maka nbudata site na Mega.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » APK » [APK] Download na wụnye igwefoto Meizu MX6 na gam akporo ọ bụla
Etu esi tinye akara aka dijitalụ na dọkụmentị sitere na gam akporo gị. (Ma jupụta ha)
Samsung iji nye mmelite nche kwa ọnwa maka ama ama n'efu na United States